In ka badan 275 Sano Jacob Hooy - Laga bilaabo uunsi ilaa Cbd • Dawooyinka Inc.eu
In ka badan 275 sano oo Jacob Hooy - laga bilaabo dhir udgoon ilaa CBD
Sanadkii 18, Netherlands waxay sameysay xarunta ganacsiga ee Yurub. Waxyaabaha ka yimid adduunka oo dhan ayaa laga ganacsaday halkan. Tani waxay soo bandhigtay barwaaqo iyo fursado ganacsatada yaryar, kuwaas oo Jacob Hooy uu si xushmad leh uga jawaabay. Wuxuu iibsaday dhisme ku yaala websaydhka Amsterdam wuxuuna bilaabay iibinta dhirta 1743. Shirkadda waxay ku korodhay shirkad weyn oo leh wax ka badan ka soo saaraha 4000 oo ay ku jiraan CBDsaliida iyo kaabsoosha CBD. "Ku dhufashada xilligan."
Dhammaantood waxay ku bilaabeen caraf udgoon oo laga urin karo meel ka fog bakhaarka geedaha ee Limmen. Waxay dib u xasuusinaysaa waqtigii United East India Company (VOC) waxayna ahayd bilowga taariikh hodan ah oo soo jirtay 275 sano. Summaddu waxay ku jirtay gacanta qoyska Oldenboom fac ka fac. Milkiilaha Rik Oldenboom: “Waxaan haysanay magaca Jacob Hooy, maxaa yeelay kani waa magac ku yaal Nederland, gaar ahaan Amsterdam. Jacob Hooy wuxuu u taagan yahay qurux, caafimaad iyo wixii ka sarreeya dhammaan waxyaabaha caddaaladda ah. ”
Bilowgii, kuwani waxay u badnaayeen dhir iyo udgoon, laakiin hadda alaabooyin kale oo badan ayaa la iibiyaa. Laakiin badeecooyin badan ayaa lagu daray halka ay isku mid ka yihiin sida is qurxinta, saliidaha lagama maarmaanka ah. Sidaa darteed layaab malahan in Jacob Hooy uu magaca purveyor u isticmaali karo maxkamada wax ka badan 4000 oo alaab ah. Nadiifiyaha loo yaqaan 'Royal Household' waxaa soo bandhigay 1815 King Willem I iyo, oo ay weheliso magaca boqortooyada (1806), waa mid ka mid ah qurxinta boqortooyada ugu da'da weyn dalkeena. Shirkaddu wali ma istaagin wax ka badan 275 sano. Oldenboom: “Dabcan sidoo kale waxaan iibineynaa dhibaatada xilligan taagan: saliidda CBD. Taas lama jiidi karo. CBD waxaa loo adeegsadaa dhammaan noocyada cudurrada, macaamiishana waxaan ka helnay falcelinno badan oo wanaagsan.
Limmen gudaheeda, farsamooyinka ugu casrisan ayaa hada la adeegsadaa waxaana dhalooyinka Cbd lagu wareejiyaa suunka xamuulka si tiro badan - malaayiin sanadkiiba loogu diro macaamiisha kala duwan. Kaliya maahan astaan ​​u gaar ah, laakiin sidoo kale waxa loogu yeero calaamadaha gaarka loo leeyahay. Nederland iyo Beljam waa suuqyada ugu waaweyn, laakiin badeecooyin badan, oo ay ku jiraan saliidda CBD, ayaa sidoo kale loo dhoofiyaa Shiinaha, Jarmalka, Kuuriya, Japan, Taiwan iyo Kariibiyaanka. Dukaammada waaweyn ee websaydhka ah, sida Bol.com, ayaa sidoo kale xambaarsan wax soo saarka CBD ee Jacob Hooy.
Akhri wax dheeraad ah jacob-hooy.nl (Xigasho)
CBDsaliid cbdEuropamaaliyad ahaancaafimaadkaNederland
U isticmaal waxyaabaha la kariyo si ka wanaagsan xashiishadda sigaar cabista inta lagu jiro aafada
COVID-19 wuxuu noqday walaac caalami ah. Dhamaanteen waxaan dooneynaa inaan ogaano waxa la sameeyo si amaan loo helo ...
Ma rabtaa inaad isku daydo CBD? Tani waa waxa aad u baahan tahay inaad ogaato
Haddii aad xiiseyneyso qaadashada CBD, waa kuwan waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato ...
Xakameynta Xashiishadda: Shirkadaha Xashiishaddu waxay ku arkeysaa iibka LA inuu sii kordhayo
Markuu coronavirus ku faafo California, shirkadaha xashiishka oo ay ku jiraan Lowell Farms, Caliva, Ubax macaan, NUG ...
Daroogooyinka iyo Corona
Xalka ugu horreeya ee Hindiya ee loo yaqaan 'Ayurvedic cannabis' (Bhang) ee loogu talagalay xanuunka caadada
Soo saaraha Cannabis Aphria wuxuu u arkaa fursado magacaabista Joe Biden
Cannabis Faransiiska Dowladda Faransiiska ayaa dhowaan cabbiri doonta aragtida dadweynaha iyadoo loo marayo sahan internet ah
Sidee CBD ugu shaqeyn kartaa kaabis nootropics ah?
saamiyada America maalgelinta Canada Canna-Tech cannabis beerista cannabis CBD saliid cbd cocaine dembi go'aan qaadasho xayawaanka daroogada waxbarashada Europa maaliyad ahaan caafimaad leh caafimaadka xagasha KHLA sharci ahaan sharciyeynta sharci-dejinta lsd mdma daawada cawska microdosing Nederland netflix cilmi baaris boqoshaada maskaxiyan mukhaadaraadka synthetic THC Maraykanka Boqortooyada Ingiriiska qabatinka cunto Adduunka oo dhan sharciga saliida cannabis baaritaanka weed beerista cannabis xtc
Samee degel - WEB360.nl